Charlotte Mid-Century Home nke oge a, Mpaghara buru ibu, Ụlọ akwụkwọ ukwu na gburugburu Parks
Ụlọ Nzukọ Alaeze maka ire ere, Na-ebi n'Ụlọ Nzukọ
Charlotte Mid-Century Ugbu a
Home » Ndepụta » Charlotte Mid-Century Ugbu a
Sq Na: 2364
Lee Nkiri Vidio
N'elu ogige ntụrụndụ na nnukwu osisi ndò na nna na-agakarị ihe onwunwe, Charlotte Mid-Century Modern Home na-agụnye iwu ikpe ụlọikpe ya, ọdọ mmiri na-esite na slide na mmiri mmiri.
Ịnọdụ na 1.37 dị iche iche, akụkụ nkeonwe, a na-ewu ụlọ ahụ ma tinye ya iji jiri ohere mara mma mee ihe. Ejiri ya bụ ihe ndị a na-ewu ewu na narị afọ nke narị afọ dịka nkwụsị a na-emeghe na akwa ụlọ elu, na ọtụtụ windo buru ibu iji jupụta ìhè anyanwụ.
Ụfọdụ n'ime ihe nkwalite na ihe ndị eji eme ihe gụnyere - nkume na mpụga cedar, oghere ọkụ na nkume nkume, ụlọ iri nri-na-kichin na mpempe akwụkwọ granite, ụlọ mmanya, ezigbo ịsa ahụ na ala ụlọ na akwa mma, ọnụ ụzọ French, na ọkụ ọhụrụ na ikuku oyi (2015), yana ụlọ ọhụrụ nke nwere shingles ụlọ (2011). N'ime mita 2364, ihe niile dị n'otu ọkwa. Ebe a na-echekwa nke ọma na-agụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300 square feet nke floored, dị mfe ịnweta ohere nchekwa na ọnụ ụzọ ohere.
N'ịbụ onye nwere mmasị n'ịkụ chaa chaa chaa chaa chaa, ụlọikpe tennis na-achịkwa ya, e meghachikwara ya na fiberglass na-adị ọhụrụ, akara ọhụrụ, na netwọk ọhụrụ. N'obodo jupụtara na kọlịlọn, ọ dịghị mkpa ka ị sonyere otu! Jikọọ na ọkwá ma mee oge egwu na ụlọ gị na ụlọikpe nke ụlọ gị - enweghị ichere ka ụlọikpe nwee ike ịnweta, enweghị ọhụụ, ma ọ bụ nkwụsịtụ. Na 40 'ogologo, ọkụ 8, egwu abalị dị iche iche.
Ebe dị mkpa na 1.37 private acres na iji ihe niile Charlotte nyere, ụlọ dị n'ime obere ụlọ na ụlọ akwụkwọ kachasị mma na Charlotte -
Ụlọ Akwụkwọ Ndị Kraịst Charlotte (3 / 4 nke otu mile si n'ụlọ)
Ụlọ Akwụkwọ Ụbọchị Providence (3 / 4 nke otu mile si n'ụlọ)
Ụlọ Akwụkwọ Latin Charlotte - Ngwongwo 10 nkeji
Ụlọ Akwụkwọ Ụbọchị nke Charlotte - ihe na-erughị minit ise
(Ụlọ akwụkwọ anọ dị n'elu na-anọchite anya ụfọdụ n'ime ụlọ akwụkwọ nzuzo kachasị elu na NC)
Fletcher School - ụgbọala nkeji anọ
Ụlọ akwụkwọ Charlotte Prep - njem 5 nkeji
Ụlọ akwụkwọ ndị Juu Lubavitch - gafee n'okporo ámá
Ụlọ Akwụkwọ Ụbọchị Iwu - na-erughị drive 10 nkeji
Ụlọ Akwụkwọ Ndị Carmel - na-erughị drive 10 nkeji
Obodo ndị Juu Community (JCC) ma ọ bụ na-akpọkarị "J" site n'aka ndị obodo - otu kilomita site n'akụkụ nke ọzọ nke obodo Lansdowne
Obodo Charlotte dị mma maka ịnụ ụtọ n'èzí. Ije ije nkeji iri ga-ahụ gị McAlpine Creek Greenway ma ọ bụ James Boyce Park na-enye ọtụtụ kilomita nke ijikọta ụzọ ụkwụ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba chaa chaa, ịnya nhọrọ maka onwe gị ma ọ bụ ụmụ obere ụmụaka enweghị njedebe. Ụzọ ụkwụ na-aga n'akụkụ abụọ nke Sardis Road ma nweta Greenway System. Onye nwe ugbu a na-esi n'ụlọ ahụ gbagoo kpọmkwem na Charlotte - ọtụtụ narị kilomita, gụnyere elu ụlọ, Meyers Park, Southpark, Cotswold nke dị na ọdịda anyanwụ, na n'ụzọ niile ruo Monroe Airport na Monroe, NC n'ebe ọwụwa anyanwụ, ehihie na abalị. Charlotte nwere ezigbo ìhè ọkụ n'okporo ámá na mma ihu ọma na n'okporo ámá karịsịa centralized gburugburu ụlọ.
Ihe oriri ndị ọzọ nke ụlọ Charlotte a nọgidere na-eme nke ọma na oche tennis gụnyere:
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 300 nke na-agba ọsọ, nke dị mfe (ohere 8 'na etiti) nchekwa;
nnukwu oghere dị na steepụ;
onye na - arụ ọrụ ụlọ - na - ebelata mkpa maka AC (ma e wezụga ụbọchị kachasị mma) site n'iji ike dị mma iji kpalie ikuku si n'akụkụ nile nke ụlọ, na - emegharị igwegharị ma dochie ọkụ, n'ime ikuku na onye na -
onye na-ahụ maka ikpuchi ikpuchi ikpuchi ikpuchi ihe nile nke ulo ma gbochie mkpofu ahihia mgbe onye na-adighi adighi eji ya eme ihe;
ịzụ ahịa na ịzụ ahịa na ebe niile (dịka ebe obibi dị ala karị);
aluminum gutter cover ebe ọ dị mkpa;
nkedo na French drain usoro - iji gbochie mmiri ozuzo na-abata n'ime nsị ohere;
Ogwe 150 na-agbanyekwu nchekwa, awụfụ, n'azụ ájá, na oghere ụlọ ọhụrụ na shingle ụkpụrụ ụlọ 40 (2011 - dị ka ụlọ ezumike)
ọkụ na-ekpuchi ọkụ na mpaghara 4 nile, na n'akụkụ abụọ nke ọnụ ụlọ ego
5-ton HVAC unit - arụnyere 2015 - dị ntakịrị karịa ka ọ dị mfe iji nnukwu expansions gaa ebe dị ndụ (3 ½ ton unit ga-ezu maka eserese square ebe.);
2011 re-roofed na 40-afọ shingles ụlọ;
2013, a na-eji usoro ntụghari ọ bụla dochie ya na ebe ọ bụla;
Ngwurugwu dewider nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ruru ala ka ọ ghara imebi ya ruo 5,000 n'ogo ụkwụ nke ebe nchara;
oghere ntinye na klọchi na-enweghị isi na isi ụzọ;
ogologo ma ọ bụ ndị tozuru etozu wax-leaf ligustrum hedge na-enye nzuzo zuru oke na-egbochi ìhè si na tennis tennis;
ogige dị elu na-agba gburugburu gburugburu oche tennis;
Ejiri ọkụ asatọ (ọkụ abụọ n'akụkụ nkuku nke ọ bụla na ogwe 40).
"Ozi e weere na a pụrụ ịdabere na ya ma ọ bụghị nkwa."
Ahịa: $ 538,000
Okwu: 6610 Sardis Road
Afọ Wuru: 1979
Ụkwụ Square: 2364
Ime ụlọ: 3
Ụlọ ịwụ ahụ: 2.1
Ọdọ mmiri: Na-ala
Ụdị Ngwongwo: Ezigbo Ezinụlọ
mputa: Nkume na Osisi
Oke Lot: Ụlọ ọrụ 1.37
Aha mbụ: *
Aha ikpeazụ: *
Nke gara agaOgwuIhe na-esoteEbube Ezubere, Ezubere nke Ukwuu, Na-eche Maka Nkwụsị
Ebube Ezubere, Ezubere nke Ukwuu, Na-eche Maka Nkwụsị